AKHRISO+CADEYN: Siyaasi Muuse Cali Jaamac oo ku guuleystay ka mid noqoshada baarlamaanka Puntland ee 2019-ka. – Puntlandtimes
AKHRISO+CADEYN: Siyaasi Muuse Cali Jaamac oo ku guuleystay ka mid noqoshada baarlamaanka Puntland ee 2019-ka.
October 9, 2018 W LAASCAANO
QARDHO(P-TIMES)- Siyaasi Muuse Cali Jaamac oo kamid ah Siyaasiinta Puntland ayaa beeshiisu u wakiilatay in uu ka mid noqdo mudanayaasha baarlamaanka Puntland ee hadda xulidoodu ka socoto gobalada kala duwan, doorana doona madaxda cusub ee Puntland bilowga sannadka 2019-ka.
Waxgaradka guud ee beelaha Muuse Suldaan, Ismaaciil Suldaan iyo Guuleed Cumar ee beesha Cismaan Maxamuud ayaa isku raacay in Siyaasigan waqtigan uu ku haboon yahay in loo dirsado matalaada baarlamaanka Puntland.
Waxgaradkan ayaa si rasmi ah ugu wareejiyey booskan in uu noqdo cida u matalaysa baarlamaanka Puntland Siyaasi Muuse Cali Jaamac, waxayna kula dardaarmeen in uu si wanaagsan u guto waajibaadka loo igmaday.
Isimadda iyo waxgaradka ayaa sheegay in ay Puntland u baahan tahay in waqtigan loo diro cid wax badan ka og marxaladihii lasoo maray, waxaana Muuse uu ka mid ahaa dadkii wax ka asaasay dawladnimada hadda loo tartamayo.
Xildhibaan Muuse Cali Jaamac ayaa u mahad celiyey Odayaasha, waxgaradka iyo duqowda dhaqanka ee u wakiishay in uu waqtigan xasaasiga ah u matalo baarlamaanka Puntland, wuxuuna sheegay in uu ka shaqeyn doono maslax guud iyo tan matalaad gaarka ah ee beeshiisu dirsatay.
Talaabada isku raacida xulida Musharax Muuse Cali Jaamac ayaa ku soo beegantay waqti xasaasi ah, maadaama guud ahaan beelaha Puntland ay hadda xulayaan xubnaha u matalaya baarlamaanka cusub, xili ay socdaan wacyigalino badan oo la xariira sidii ay beeluhu usoo dirsan lahaayeen matalaad dhab dad qaadan kara.
FIIRI SIDA GAAS USOO SHARAXAY CIYAALKA MADAXTOOYADA SI AY UGU TARTAMAAN KURAASTA AQALKA BAARLAMAANKA UNA METELAAN BEESHOODA.
WAA AFDUUBKA CAD OO LAGU SAMAYNAYO BEELAHA.
HADHOW GAAS U CODAYN OO XILDHIBAANADA KALENA LAALUUSHKA UGU DHIIBIN.
AKHRI MAGACYADA SHAKHSIYAADKA GAAS SOO SHARAXAY